मृत्युपूर्व आफ्नो सम्पत्तिलाई के गर्न चाहन्छन् बिल गेट्स ? अचम्ममा पर्नुहुनेछ - Saptakoshionline
मृत्युपूर्व आफ्नो सम्पत्तिलाई के गर्न चाहन्छन् बिल गेट्स ? अचम्ममा पर्नुहुनेछ
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५ समय: ८:०६:३२
आजकालको जमानामा पैसाको ताकत हरेक सम्बन्धभन्दा ठूलो छ । पैसाले सबै कुरा किन्न सकिन्नँ भन्ने उक्ति आजकाल भन्नका लागि मात्र भनिन्छ । तर वास्तविकता यहि छ कि जोसँग पैसा छ त्यसैको खुट्टामा संसार छ । हामीमध्ये धेरैले आफूसँग एउटा घर होस् र धेरै पैसा होस् भन्ने सोच्छौं जसबाट हामीले आफ्नो र आफ्नो बच्चाको भविष्य सुरक्षित राख्न सकून् भन्ने साचेको हुन्छौं । यो संसारमा केहि यस्ता मानिसहरु पनि छ जसको पैसाले उनका थुप्रै पुस्ताले आरामसँग आफ्नो जिन्दगी गुजार्न सक्छन् ।
यस्तै केही व्यक्तिहरुमध्ये एक माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स छन् । सन् २०१६ अक्टोबरमा बिल गेट्ससँग करिब ८१.७ बिलियन अमेरिकी डलर थियो । यससँगै उनी संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् ।
एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बिल गेट्सले मर्नुपूर्व आफ्ना सम्पूर्ण पैसा आफ्नो सन्तानलाई दिनुको साटो दान दिन चाहेको बताए ।
आफ्नो बच्चाको बारेमा बिल गेट्स भन्छन्, ‘हामीले उनीहरुलाई राम्रो शिक्षा दिक्षा दिएका छौं र केही पैसाको बन्दोबस्त पनि गरिदिएका छौं । अब उनीहरुको अगाडि आफ्नै करियर छ ।’
स्मरण रहोस्, सन् २००० मा बिल गेट्सले ‘बिल एण्ड मलिन्दा गेट्स फाउन्डेसन’ को सुरुवात गरेका थिए जसले संसारभरी आफ्नो समाजसेवाको लागि पहिचान बनाएको छ । ६० वर्षका बिल गेट्सले आफ्नो सम्पत्तिको निकै ठूलो हिस्सा आफ्नो यो फाउन्डेसनलाई दान गरिसकेका छन् । सन् २०१३ मा बिल गेट्सले यो फाउन्डेसनमा २८ बिलियन अमेरिकी डलर दान गरेका थिए र धेरै मानिसहरुलाई समाजसेवा गर्नका लागि प्रेरित गरेका थिए ।
विवाहपछि मात्रै आमा बन्ने प्रचलन नेपाल लगायत विभिन्न देशमा छ । तर विश्वमा यस्तो पनि गाउँ छ जहाँ विवाह गर्नुपूर्व नै महिल...
यो वेबसाईटबाट हुन्छ २०० बर्ष पुरानो सादा फोटो सेकेन्डमै कलर
एक नेपाली ‘नविन’ आजको डिजिटल दुनियामा विभिन्न प्रकारका वेबसाइटहरु ईन्टरनेटमा पाईन्छन । यही विभिन्न प्रकारका ...
पत्नीले किन बेचिन् १ हजारमा पति ?
नैरोवी-केन्यामा आफ्नो पति अर्कै महिलासँग देखेपछि एक महिलाले केवल १ हजार ८ सय ११ रुपैयाँमा पतिलाई बिक्री गरेकी छन् । एडना...
यसकारण दुख्छ बुद्धिबंगारा आउदा
बुद्धिबंगारा शारीरिक कारणले सबैभन्दा ढिलो आउने दाँत हो । सामान्यतया यो दाँत १८ देखि २५ वर्षको उमेरभित्र आउने गर्छ । कसै–...